Mane oo ka sheekeeyay sidii uu qarka ugu fuulay ku biirista Man United iyo wicitaankii ku dhaliyay ku biirista Kooxda Liverpool – Gool FM
(Liverpool) 09 April 2020. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa ku dhawaatay la soo saxiixashada Sadio Mane ka hor inta uusan ku biirrin kooxda Liverpool.
Weeraryahanka reer Senegal ayaa Reds 2016 ugu soo biiray adduun lacageed dhan 30 milyan oo gini kaddib labo xilli ciyaareed oo cajiib ahayd oo uu ku qaatay Southampton.
Ka hor inta uusan Anfield ku biirin, Mane ayaa diiradda u saarnaa Red Devils, waxaana 27-jirkaan uu qiray inuu ka fikiray ku biirista kooxda Old Trafford ka dhisan.
“Waxaan waqtiga ugu badan ka fikireynay Manchester United” ayuu Mane u sheegay The Times.
“Waqtigaas waxa uu ahaa mid igu adag, keydka ayaa iska fadhiyay, mana ku fikireyn qof isoo waco, balse waan ku farxay marka aan arkay wicitaankiisa [Jurgen Klopp] iyo inuusan imoodin inaan ahay heesaa.”
Ereyga ‘rapper’ oo marka la micneeyo ah heesaa qaada heesaha nooca loo yaqaano raabka ayaa Mane u bixiyay macallinkiisa Klopp oo warreysi ku sheegay in xiddigga garabka ka ciyaara uu u mooday heesaa raabka qaada markii uu Liverpool ku soo biirayay.
Mane oo guulo wacan la gaaray Reds sida ku guuleysiga Champions League iyo gooldhalinta horyaalka Ingiriiska oo xilli ciyaareedkii la qaybsaday Mohamed Salah iyo Pierre-Emerick Aubameyang oo ay min 22 gool wada dhaliyeen.
Mane ayaa horraan sheegay inuu ku sigtay ku biirista kooxda United sidoo kalena uu la kulmay maamulka kooxdaas sida uu sanadkii hore u xaqiijiyay majaladda Mirror.
“Dalab ayay iisoo bandhigeen, balse isla toddobaadkaas waxaa isoo wacay Klopp.
“Wuxuu i yiri: ‘Waxay ila tahay kooxda ugu haboon, tababaraha saxda kuu ah, waxaana u maleynaa inay kuu wanaagsan tahay doorashada Liverpool’.
“Aniga ahaa, waxay ila ahayd go’aanka ugu saxan, waxaana ku dhahay: ‘Waxaan aadayaa Liverppol’.” ayuu Mane kaga hadlay doorashadiisii Liverpool.
Mane kooxdiisa Liverpool ayaa hadda hoggaamineysa horyaalka Premier League, inkastoo horyaalka hakad loo galiyay faafitaanka coronavirus awgiis, waxaana 25 dhibcood ay ka sarreeyaan kooxda ku soo xigta ee Manchester City.